दिल्लीमा मिश्राको स्थान लिन सक्ने तीन खेलाडी | Hamro Khelkud
दिल्लीमा मिश्राको स्थान लिन सक्ने तीन खेलाडी
एजेन्सी – दिल्ली क्यापिटल्सका अनुभवी स्पिनर अमित मिश्रा शनिवार कोलकाता नाइट राइडर्ससँगको खेलको क्रममा औंलामा चोटको कारण इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) २०२० को बाँकी सबै खेल गुमाउने भएका छन् ।
दिल्लीसँग अनुभवी स्पिनर रविचन्द्रन आश्विन र अक्षर पटेल छन् । लेग स्पिनरमा सन्दीप लामिछाने छन् । चार मात्र विदेशी खेलाडी खेलाउन पाउने नियमको कारण सन्दीप दिल्लीको बेन्चमा बस्दै आएका छन् । मिश्रा बाहिरिदा सन्दीपले प्लेइङ-११ मा मौका पाउने सम्भावना बढेको छ । तर दिल्लीको चार विदेशी कोटामा स्थान बनाउन सन्दीपलाई सहज छैन ।
दिल्लीले मिश्राको स्थानमा कस्तो खेलाडीलाई अनुबन्ध गर्छ त्यसले पनि प्रभाव पार्ने पार्छ । दिल्लीले मिश्राको स्थानमा स्पिनरलाईनै अनुबन्ध गनुैपर्छ भन्ने छैन । दिल्लीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार अनुबन्ध गर्न सक्छ । दिल्लीको तीव्र गतिको बलिङ केहि कमजोर देखिदा त्यसको सम्भावना पनि देखिन्छ । मिश्राको स्थान लिन सक्ने तीन खेलाडी यस प्रकार छन् ।
३. शाम्स मुलानी
२३ वर्षिय शाम्स मुलानी मुम्बईबाट घरेलु क्रिकेट खेल्ने बायाँ हाते अफस्पिनर हुन् । उनले तल्लोक्रममा ठूला सटको क्षतमा पनि राख्छन् । मुलानीले २२ टि२० खेल खेलेका छन् । जसमा २० विकेट लिएका छन् । उत्कृष्ट प्रर्दशन २६/३ छ । इकोनमी ६.२८ छ । घरेलु क्रिकेटमा प्रभाव जमाउँदै आएका मुलानीको खेल्ने शैली भारतीय अलराउन्डर रविन्द्र जडेजासँग मिल्दोजुल्दो पाइन्छ ।
मुलानीलाई दिल्लीले अनुबन्ध गर्दा तल्लोक्रम ब्याटिङ बलियो पनि बन्ने छ । दिल्लीसँग तल्लोक्रममा मार्कस स्टोइनिस र अक्षर पटेल अलराउन्डरको रुपमा छन् । ६ टि२० इनिङमा मुलानीले उनले ७९ रन बनाएका छन् । जसमा उत्कृष्ट प्रर्दशन ७३ रन छ । मुलानी एक उत्कृष्ट फिल्डर समेत हुन् । जसले गर्दा दिल्लीले मिश्राको स्थानमा मुलानीलाई टोलीमा ल्याउन सक्छ ।
२. जलज सक्सेना
केरलाबाट घरेलु क्रिकेट खेल्दै नियमित उच्च प्रर्दशन गर्दै आएका अलराउन्डर जलाज सक्सेना पनि मिश्राको स्थान लिन सक्ने खेलाडी हुन् । घरेलु क्रिकेटमा राम्रो अनुभव बटुलेका ३३ वर्षिय सक्सेनाले राम्रो ब्याटिङ र बलिङ गर्ने गर्दछन् । अफ स्पिनर सक्सेनालाई दिल्लीले तल्लोक्रम ब्याटिङ बलियो बनाउन टोलीमा अनुबन्ध गर्न सक्ने सम्भावना छ ।
सक्सेनाले ५४ टि२० खेलमा ४९ विकेट लिएका छन् । जसमा उत्कृष्ट प्रर्दशन १६/५ छ । टि२० मा उनको उत्कृष्ट प्रर्दशन ५५ रन अविजित छ । ९३ लिष्ट ए मा ३ शतक र ७ अर्ध शतक सहित १ हजार ८ सय ८४ रन बनाएका छन् । १ सय ८ विकेट लिएका छन् । उत्कृष्ट प्रर्दशन १ सय ३३ रन ४१/७ छ । उनको लय र दिल्लीको आवश्यकतालाई हेर्दा मिश्राको स्थान लिन सक्ने खेलाडीको रुपमा हेरिएको छ ।
१. प्रविन दुवे
२७ वर्षिय लेगस्पिनर प्रविन दुवे मिश्राको स्थान लिन सक्ने एक प्रबल दाबेदार खेलाडीमा रहेका छन् । दिल्लीसँग लेगस्पिनरमा सन्दीप लामिछाने छन् । तर दिल्लीमा कागिसो रबाडा, शिम्रन हेटमायर, एनरिच नोर्टजे र मार्कस स्टोइनिसलाई नियमित राम्रो प्रर्दशन गर्दै आएका छन् । त्यसैले दिल्लीले भारतीय लेग स्पिनरलाई प्राथमिकतामा राख्ने देखिन्छ ।
कर्नाटकाबाट घरेलु क्रिकेट खेल्ने प्रविनले १४ टि२० मा १६ विकेट लिएका छन् । जसमा उत्कृष्ट प्रर्दशन १९/४ रहेको छ । इकोनमी ६.८७ छ । बेंगलोरले प्रविनलाई नेट बलरको रुपमा जारी सिजनमा राखेको छ । दिल्लीको आवश्यकतालाई हेर्दा प्रविनलाई टोलीमा अनुबन्ध गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । सन् २०१६ र २०१७ मा बेंगलोरमा रहेका प्रविनलाई यस सिजन दिल्लीले मिश्राको स्थानमा टोलीमा लिन सक्छ ।